UMartin Luther - I-Biography yeNkokheli yamaProtestanti
UMartin Luther wanikela ngeNguqulelo yamaProtestanti
NgoNovemba 10, 1483-Februwari 18, 1546
UMartin Luther, omnye wabafundi beemfundiso zezobuxoki kwimbali yobuKristu , uxanduva lokuqalisa iNguqulelo yamaProtestanti . KwamaKristu enkulungwane yeshumi elinesibhozo waqanjwa njengomkhuseli wenkokeli wenyaniso kunye nenkululeko yonqulo, kwabanye wabetyala njengomkhokeli ongubuxoki wenkolo.
Namhlanje amaninzi amaKristu ayavuma ukuba uphephe ukuma kobuKristu bamaProtestanti ngaphezu komnye umntu.
Inkolo yamaLuthere yaqanjwa ngokuthi nguMartin Luther.
Ubomi bukaMartin Luther Young
UMartin Luther wazalelwa kwiKatolika yamaRoma kwidolophu encinane yase-Eisleben, kufuphi neBerlin yanamhlanje eJamani. Abazali bakhe babenguHans noMargarethe uLuther, abasebenzi belizwe eliphakathi. Uyise, umvukuzi, wasebenza kanzima ukuqinisekisa imfundo efanelekileyo kwonyana wakhe, kwaye ngo-21 ubudala uMartin Luther wayephethe i-Master of Arts degree esuka kwiYunivesithi yase-Erfurt. Ukulandela uHans 'iphupha lokuba unyana wakhe abe ngummeli, ngo-1505 uMartin waqala ukufundisisa umthetho. Kodwa kamva ngaloo nyaka, ngelixa ehamba ngeqhwithela elikhulu, uMartin wayenolwazi oluya kutshintsha ikamva lakhe. Eyesaba ubomi bakhe xa kuthethwa ngokukhawuleza, uMartin wakhala isifungo kuThixo. Ukuba wasinda esithembisa ukuba uya kuhlala njengomonki . Kwaye wenza njalo! Ukudumala kwabazali bakhe, uLuther wangena kwi-oda yase-Augustinian e-Erfurt ngaphantsi kweenyanga, waba ngu-Augustinian friar.
Abanye bacinga ukuba isiluleko sikaLuther sokuba aqhubeke nobomi bokuzinikela ngokwenkolo kwakungekho nje ngokukhawuleza njengoko iimbali zibonisa, kodwa ukufuna kwakhe kokomoya kwakuye kwintsebenziswano kwithuba elithile, kuba wangena ebomini ngobuninzi. Wayeqhutywa yintlanzi yesihogo, umsindo kaThixo, kunye nesidingo sokufumana isiqinisekiso sokusindiswa kwakhe.
Ngapha emva kokumiswa kwakhe ngo-1507 waxhatshazwa ngokungaqiniseki kwintlekele yakhe engunaphakade, waza waphazamiseka ngokuziphatha kakubi kunye nenkohlakalo eyabonayo phakathi kwabafundisi bamaKatolika ayeye waya eRoma. Ngomgudu wokutshintsha ugxininiso lwakhe kwimoya yokomoya wakhe ophazamisekileyo, ngowe-1511 uLuther wathuthela eWittenburg ukuze athole iDktecate yeTheology.
Njengoko uMartin Luther wayezibhaptiza kakhulu ekufundeni iZibhalo, ingakumbi iileta ezibhalwa ngumpostile uPawulos, inyaniso kaThixo yaqhekeka kwaye uLuther wafika kolwazi olunzulu lokuba "wasindiswa ngobabalo ngokholo " kuphela (kwabase-Efese 2: 8). Xa waqala ukufundisa njengoprofesa wenkolo yeBhayibhile kwiYunivesithi yaseWittenburg, intsha yakhe yafumana inzondelelo yaqalisa ukuqhubela phambili kwiintetho zakhe kunye neengxoxo kunye nabasebenzi kunye nobuchule. Wathetha ngentshiseko ngendima kaKristu njengomlamli kuphela phakathi kukaThixo nomntu, kwaye ngobabalo kwaye kungekhona ngemisebenzi, amadoda ayelungisa kwaye axolelwe ngesono. Usindiso , uLuther uvakalelwa ngokuqinisekileyo, wayeyisipho sikaThixo samahhala . Akuzange kuthathe ixesha elide ngenxa yeengcamango zakhe ezinzulu ukuze ziphawulwe. Kuba kungekhona nje kuphela ukuba ezi zityhilelo zinyaniso kaThixo ziguqula ubomi bukaLuther, zaziza kutshintsha ngonaphakade umgaqo wembali yembali.
Ingqungquthela kaMartin Luther Engama-Ninety-Five
Ngowe-1514 uLuther waqala ukukhonza njengombingeleli kwiChurch Church yaseWittenburg, kwaye abantu bahlangene beva ilizwi likaThixo lishumayelekile kunanini ngaphambili. Ngeli xesha uLuther wafunda ngeCawa yamaKatolika engekho yeBhayibhile yokuthengisa iintlawulo ze-indulgences. UPapa, ngokubaluleka kwakhe kwi-"treasure treasure of merits from the saints," uthengisa iimfanelo zenkolo ngokutshintshisana nokwakha imali. Abo babathengile la maxwebhu angcolileyo bathenjiswe isihlwayo esincinci ngenxa yezono zabo, ngenxa yezono zabazalwana abathandekayo, kwaye kwezinye iimeko, ukuxolelwa ngokupheleleyo kuzo zonke izono. ULuther wayechasa esidlangalaleni ukunyaniseka nokusetyenziswa kakubi kwamandla esonto.
Ngo-Oktobha ngo-31, ngo-1517 uLuther wabethela i- 95-Thesis yakhe edumileyo kwi -Newsletter ye -Yunivesithi-i-Castle Church emnyango, iinkokeli zecawa ezinzima ngokusemthethweni ekuthengiseni ukunyaniseka nokuchaza imfundiso yeBhayibhile yokulungiswa ngobabalo kuphela.
Lo msebenzi wokubethelela iThesisi yakhe emnyango wesonto uye waba ngumzuzu ocacileyo kwimbali yobuKristu, umqondiso wokuzalwa kweProtestant Reformation.
Ukugxekwa kukaLuther kwecawa kwakubonakala kuyisongelo kumphathi wamapolisa, kwaye waxeliswa yiKardinal yaseRoma ukuba aphinde abuyele esikhundleni sakhe. Kodwa uLuther akazange avume ukutshintsha ukuma kwakhe ngaphandle kokuba umntu ambonise ubungqina bombhalo nakwezinye iimeko.
Ukuxotshwa kukaMartin Luther kunye nokutya kweeFom
NgoJanuwari ngo-1521, uLuther wasuswa ngokusemthethweni nguPapa. Kwiinyanga ezimbini kamva, wabizwa ukuba avele phambi koMlawuli uCharles V eWorms, eJamani kwindibano ebanzi yoBukumkani boBukumkani baseRoma, intlanganiso ebizwa ngokuba yi "Diet of Worms" (ebizwa ngokuthi "dee-it Vorms"). Ekulingweni phambi kwamagosa aphezulu aseRoma aseKapa kunye noRhulumente, kwakhona uMartin Luther wabuzwa ukuba alahle iimbono zakhe. Kwaye kwangaphambili nje, kungekho namnye ongakwazi ukuphikisa inyaniso yeLizwi likaThixo, uLuther wema. Ngenxa yoko, uMartin Luther wanikezwa i-Edict of Worms, evimbela imibhalo yakhe aze athi "unecala." ULuther wabalekela "ekuthunjweni" kwiWartburg Castle apho wayegcinwa ekhuselwe ngabahlobo malunga nonyaka.
Ngexesha lokuzibandakanya kwakhe, uLuther waguqulela iTestamente eNtsha kwisiJamani, enika abantu abaqhelekileyo ithuba lokufunda iLizwi likaThixo kunye nokuhambisa iBhayibhile phakathi kwabantu baseJamani okokuqala ngqa. Nangona enye yexesha eliqaqambileyo kwimbali yeBhayibhile , le nto yayingumzuzu wobunzima bokubandezeleka ebomini bukaLuther.
Uxelelwe ukuba wayekhathazekile kakhulu ngomoya omoya kunye needemon njengoko wabhala iBhayibhile kwisiJamani. Mhlawumbi oku kuchaza amazwi kaLuther ngelo xesha, ukuba "wayexoshe umtyholi ngeenki."
Qhubeka Ufunda Page 2: Iimpumelelo ezenziwa nguLuther, Ubomi bomtshato kunye neentsuku zokugqibela.
Okufezekileyo kuMartin Luther
Ngaphantsi kwesongelo lokubanjwa nokufa, uLuther wabuyela eWittenburg's Castle Church ngesibindi waza waqala ukushumayela nokufundisa apho nakwiindawo ezikufutshane. Isigijimi sakhe sisibindi sentsindiso kuYesu ngokholo yedwa, kunye nenkululeko ephosakeleyo yonqulo kunye negunya lamapapa. Ukuzikhusela ngokumangalisayo ukuthathwa, uLuther wakwazi ukuhlela izikolo zamaKristu, ubhale imiyalelo yabalusi kunye nootitshala ( iCatechism enkulu kunye neNcinci ), bhala iingoma (kubandakanywa owaziwayo "I-Fort Fortress nguThixo wethu"), bahlanganisa iifatshana ezininzi, kwaye shicilela i-hymnbook ngeli xesha.
Ukutshitshisa abahlobo kunye nabaxhasayo, uLuther watshata ngoJuni 13, 1525 kuKatherine von Bora, umninimzi owayesishiywe i-convent waza wasabela eWittenburg. Ababini babenamakhwenkwe amathathu kunye namantombazana amathathu kwaye bakhokelela ubomi obatshatayo ngokutshatyalaliswa kwindlu yeendwendwe yaseAgasti.
Ukuguga Kodwa Esebenzayo
Njengoko uLuther osekhulile, wahlushwa kwizifo ezininzi eziquka i-arthritis, iingxaki zeentliziyo kunye neengxaki zokugaya. Kanti akazange ayeke ukufundisa eYunivesithi, ukubhala ngokuchasene necawa, nokulwa nokuguqulwa kwezenkolo.
Ngowe-1530 udumo oludumileyo lwama-Augsburg (ukuvuma ukuqala kokholo lweCawa yamaLuthere ) lanyatheliswa, oko uLuther wanceda ukubhala. Kwaye ngo-1534 wagqiba ukuguqulelwa kweTestamente Elidala ngesiJamani. Imibhalo yakhe ye-theological inkulu kakhulu. Eminye yemisebenzi yakhe kamva yayineempawu ezinobundlobongela ngolwimi olungcolileyo kunye nolwenyanyekayo, ukudala iintshaba phakathi kwabaguquleli, kunye namaYuda kunye namaPapa kunye neenkokheli kwiCawa yamaKatolika .
Izinsuku zokugqibela zikaMartin Luther
Ngethuba lohambo oludlulayo ukuya emzini wakubo wase-Eisleben, kwi-mission yokuxolelana ukuze kulungiswe ixabano phakathi kweenkosana zaseMansfeld, uLuther wafela ekufeni ngoFebhuwari 18, 1546. Abantakwabo babini kunye nabahlobo bakhe abathathu babesecaleni. Umzimba wakhe wabuyiselwa eWittenburg ngenxa yokungcwaba kunye nokungcwaba kwiChurch Church.
Ingcwaba lakhe lithe ngqo phambi kwepulpiti apho wayeshumayela khona kwaye angabonakala namhlanje.
Ngaphezu komnye umququzeleli webandla kwimbali yobuKristu, impembelelo kunye nempembelelo yeminikelo kaLuther kunzima ukuchaza ngokufanelekileyo. Ilifa lakhe, nangona liphikisana kakhulu, liye lahamba ngokugqithiseleyo kwinguqulelo lukaLuther olwaluthandayo ukuvumela iZwi likaThixo ukuba liziwe kwaye liqondwe ngabanye ngabanye. Akukho ukunyanisela ukuthetha ukuba phantse onke amaqumrhu amaKristu angamaProthestani anamhlanje athatha inxalenye yelifa lakhe elingokomoya kuMartin Luther, indoda enokholo olukhulu.
UbuKristu Namhlanje - Imbali YamaKristu & IBhayibhile
I-Red Salvation Army Ii-Kettles eziBomvu Zijika ngeeNkozo zibe novelwano
Imbali ye-Anglican / i-Episcopal Denomination
Iimpawu eziphezulu ezi-10 zokuziphatha kwiimfazwe zeMfazwe
'UThixo Uluthando' Ivesi leBhayibhile